Xisbiyo Siyaasadeed oo la guddoonsiiyay Shahaadada KMG ah – GMDQ
Waxaa la geliyey Warbixinno, Xisbiyada
Xisbiyo Siyaasadeed oo la guddoonsiiyay Shahaadada KMG ah
Maanta oo ay taariikhdu tahay 1/04/2019, waxaa xarunta Guddiga Madaxabannaan eeDoorashooyinka Qaranka (GMDQ) lagu guddoonsiiyey shahaadada diiwan gelinta KMG ah xisbiyada kala ah, xsibiga KULAN, xisbiga HORUSOCOD, xisbiga MIDNIMADA SOMALIYA, iyo xisbiga DOWLAD WANAAGA.
Waxaa munaasabada shahaada gudoonsiinta xisbiyada ka soo qeybgaley ururada bulshada rayidka, xisbiyo horey loo diiwaangeliyey iyo bahda saxaafada. Furitaanka munaasabadda waxaa ka hadley ku simaha xafiiska diiwaangeliyaha xisbiyada Maxamed Maxamud Xasan (Sandheere) oo sheegay in xisbiyada laga doonaayo inay doorkooda qaataan kaalin weynna ka qaataan gaarida doorasho cod iyo qof ah iyo nidaamka asxaabta badan leh.
Sidoo kale waxaa kulanka hadalo mahadnaq iyo bogaadin isugu jiray ka jeediyey afarta (4) xisbi ee shahaadada guddoomay iyaga oo ka hadlay waxyaabihii ay la kulmeen intii ay kusoo jireen nidaamka is diiwaan gelinta. Waxay sheegeen in xafiiska diiwaan gelinta xisbiyada ee GMDQ uu ugu adeegay si hufan oo aysan kala kulmin wax musuq ama caga-jiid ah.
Gabagabada munaasabada waxaa shahaadada si wada jir ah u gudoon siiyey xubaha Guddiga ee kala ah, Eng Maxamed Axmed Nuur iyo Maxamed Xasan Taani. Waxuuna Komiishiner Maxamed Axmed Nuur kula dardaarmey xisbiyada KMG ah in qof walboo Soomaali ah ay ka qeybgeliyaan nidaamka xisbiyada badan, ayna u istaagaan habka Dimuqradiyada oo ay saldhiiga u tahay doorasho cod iyo qof.
Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa diiwaangeliyey 43 xisbi KMG ah. Waxaana looga fadhiyaa inay dalka ka saaraan nidaamka ku saleysan 4.5 loona gudbo doorasho cod iyo qof oo xor iyo xalaal ah.
Waxaa la faafiyey April 1, 2019 April 17, 2019